🙋‍♂️ टीका माक्खिमजी तपाईको गीतहरु हङकङमा सुनिन्थ्यो ? चलचित्र पो बनाउनु भएछ है ?
- हो, हजुर हङकङ बसाई को २३ बर्षे अवधिमा , बिभिन्न सँघ सँस्थाहरु खोलिएको छ । याक्थुङ चुम्लुङ हङकङमा म सन २००५ सालदेखि आवद्द हुँदै गीतसंगीत प्रेमी भएको कारण जसो तसो लिम्बूभाषा र नेपाली भाषाको गीत गाउॅदै मनोरन्जन गर्दै आउने क्रममा, धेरै दाजुभाइदिदी बहिनीहरुले तिम्रो स्वर राम्रो छ । भनेर तारिफ गरिदिनु भयो । सन २०१३ मा मैले आफ्नै स्वरले सजिएको लिम्बुभाषाको एल्बम सुन्ने मात्रै निकालेको थिएँ तर यस बेला सुन्ने एल्बम करिब करिब बिस्थापित हुॅदै थियो । हेर्ने को समय आएको थियो । मेरो एल्बम को गीतहरु सबै गुमनाम भयो । त्यति राम्रा गीत शब्दहरु ओझेल पर्दा हिम्मत हारिन । २०१५ मा नेपाल जाॅदा एउटा गीतको म्युजिक भिडियो बनाएॅ । जुन गीत हङकङबाटै बिक्रम गुरुङ भाईको ज्याप स्टुडियोबाट यु ट्युबमा अहिले एक लाख भ्यूज पारगरी सक्यो । पोहोरसाल पनि नेपाल जाने अवसर मिल्यो र छोटोमीठो कथा बस्तु मिलाएर चलिचत्र बनाउने योजना बन्यो । गहकिलो कथा बस्तु बोकेको लघु चलचित्र बनेको छ ।
🙋‍♂️ यो चलचित्र ए सोमिप्मे भनेको के हो ? कस्तो खालको चलचित्र हो ?
- ए सोमिप्मे भनेको लिम्बूभाषामा ए सोल्टिनी भनेको हो, लिम्बू भाषामा सोल्टि सोल्टिनी भउजु नन्द र देवरहरुमा सम्बोधन गरिने सिष्टाचार सम्बोधन हो यो । यस लघु चलचित्रले लिम्बूहरुको बिहेवारी बिशेषलाई फोकस गरेको छ । यो लघु चलचित्र आउँदो मे १ तारिख हङकङमा प्रिमियर हुदैछ । हङकङवासी सबैलाई हार्दिक स्वागत छ ।
हो धेरै निर्माताहरू आफै पनि खेल्ने अभिप्रायले चलचित्र बनाएका छन् । मैले भने कला संस्कृतिको संरक्षणा गरौं भनी चलिचत्र निर्माण गरेको हुँ ।
🙋‍♂️ हङकङबाट यहाँका केही निर्माताहरुले चलचित्रहरु निर्माण गर्नु भएको छ ? कतिले रहरले बनाए तपाईले चाँहि किन बनाउनु भएको हो ?
- हो धेरै निर्माता बन्नु भएको छ । हङकङबाट तर चलचित्र क्षेत्रमा पैसा मात्रै लगानि गरेर हुँदैन । चलचित्र सम्बन्धि अलिक बुझेको र पैसा लगाई सके पछि कथाबस्तुहरु पनि हेर्नु अनि बुझ्नु पर्छ, अनि आफै पनि खट्नु पर्छ । हो धेरै निर्माताहरू आफै पनि खेल्ने अभिप्रायले चलचित्र बनाएका छन् । मैले भने कला संस्कृतिको संरक्षणा गरौं भनी चलिचत्र निर्माण गरेको हुँ ।
🙋‍♂️ चलचित्रको लगानी र यसको बारेमा केही कुरा भनी दिनुहोस् न ?
- चलचित्र एउटा यस्तो माध्यम हो, जस बाट हामी हरेक प्रकारको अभिव्यक्त गर्न सक्छौ । तसर्थ मेरो चलचित्रको सवालमा लिम्बू जातीको बिवाह प्रसङ्गलाई अघि सारेको छु । अभिनयमा डुबीसके पछि कम से कम दर्शकहरूो न्याय र माया पाउने हिसाबले नै बनाएको छु । आशा छ दर्शकहरुलाई सन्तुष्टि दिन सक्नेछौँ ।
🙋‍♂️ चलचित्रबाट के आशा गर्नु भएको छ ?
- हङकङको दर्शकहरु अहिले आफ्नो जातीय भाषा , सॅस्कार , संस्कृति, भेषभुषा , मौलिक्ता प्रतिधेरै सचेत भै सकेका छन् । तसर्थ म ढुक्क छु । सकेसम्म आफन्त साथीभाइहरु र फेसबुक मार्फत प्रचार गरी रहेका छौँ । अनि ६५ बर्ष पार गर्नु भएका बाबा आमाहरुलाई निशुल्क प्रबेश छ । आशा छ दर्शकहरु सबैबाट मलाई हौसला प्रोत्साहन मिल्नेछ ।